May 31, 2018 By Buzz Myanmar News in နိုင်ငံတကာ, ဗဟုသုတ Tags: တိုင်းပြည်, လိင်ကျွန်, သမ္မတ
ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကမ္ဘာသို့ စတင် အသိပေးပြောကြားသူမှာ ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto( 藤本 健二 ) ဖြစ်သည်။ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto သည် ၁၉၈၈ခုနှစ် မှ ၂၀၀၁ခုနှစ် အထိ သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il) အား ဂျပန်အစားအစာ (Sushi ) ပြုလုပ်ပေးရသော စားဖိုမှူးတယောက်ဖြစ်သည်။
ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ဒုတိယပြောပြသူမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယားသို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် သူမ၏ အတွေ့အကြုံကို Marie Claire မဂ္ဂဇင်းတိုက်အား ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့သည်။
ထို၂၀၁၀ မှ ယနေ့အထိ မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူများက ဖြည့်စွက်၍ “ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့” အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား TV interview တို့တွင် အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့တွင်မိန်းမလှပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ထိုမိန်းမလှတို့သည် အဓိကအားဖြင့် သမ္မတကိုဖျော်ဖြေရန်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (Worker’s Party of Korea)ရှိ ရာထူးကြီးသူများကိုလည်း ဖျော်ဖြေရသည်။
ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il l) က ဖခင် ကင်မ်အီးလ်ဆောင်း ( Kim il Song )အား စိတ်ပျော်ရွှင်စေရန် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ထိုမိန်းကလေးများသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ အလှဆုံးမိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ်သည် သူ့အဖေအကြိုက် မိန်းမလှလေးများကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။
သမ္မတ ၃ ဦး၏ အကြိုက်ပေါ်မူတည်၍ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတို့သည် အပြောင်းအလဲရှိလေသည်။
မျက်နှာဖောင်းဖောင်းနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်သည်။
အရပ် ၁၆၀ စင်တီမီတာ ကျော်ကျော်ဖြစ်နေရမည်။ (၁၇၀ စင်တီမီတာအောက်)
အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၇နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် အလယ်တန်းကျောင်းများသို့ လာရောက်၍ မိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ထိုသူတို့သည် မိန်းမလှလေးများ လွတ်သွားမည်စိုး၍ တယောက်ချင်း သေသေချာချာ စီစစ်သည်။ အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများသည် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။တခါတရံ သမ္မတကိုယ်တိုင်လာ၍ စင်တော်ကောက်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း အတွက်” ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှများ အဖွဲ့အသစ်” ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း နှစ်သက်သည့်ပုံစံကတော့
မျက်နှာသွယ်သွယ် နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများဖြစ်ရမည်။
အရပ် ၁၇၀ စင်တီမီတာ ကျော်ရမည်။
အရွေးခံရသော မိန်းကလေးတို့သည် စာမေးပွဲ ၃ ဆင့် အစစ်ခံရသည်။
မိန်းကလေးတို့သည် သူမကိုယ်သူမ အလှဆုံးဟုထင်သော အမူအရာကို လုပ်ပြရသည်။သူမ၏ အတော်ဆုံး ဖျော်ဖြေရေးတခုကို သရုပ်ဆောင်ပြရသည်။ သီချင်း၊အက၊အတီးအမှုတ် စသည်။မျိုးရိုးကောင်းရမည်။မျိုးရိုးထဲတွင် ထောင်ကျသူမရှိစေရ။
ပထမအဆင့် အောင်မြင်သောမိန်းကလေးများ သည် တစ်လအကြာတွင် ဆေးစစ်ရသည်။အဓိက အပျိုစစ် မစစ် ဆေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းကလေးတို့ ဒုတိယအဆင့်စာမေးပွဲကျလျှင် အပျိုမစစ်၍ ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းတွင် ခေါင်းမဖော်ရဲအောင် အရှက်ရကြလေသည်။
ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး အမာရွတ်တခုရှိလျှင် အပယ်ခံရသည်။ကူးစက်ရောဂါရှိ မရှိ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်း အကုန်စစ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
တတိယအဆင့် အောင်မြင်သွားသောမိန်းကလေးသည် ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း?
အလယ်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးပါက မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ မြို့တော် ပြုံယမ်းသို့ အပို့ခံရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့်သည်အထိမိဘ ဆွေမျိုးများနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်မရတော့ပေ။ပထမဦးစွာ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတ ၃ ဦး သမိုင်းကို အသေးစိတ် မှတ်သား ကျက်မှတ်ရလေသည်။
သူတို့နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များ ဖတ်နိုင်သလောက်များများ ဖတ်ရသည်။စာစီစာကုံးများရေးရသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာလွှာများစွာကိုလဲ အပြိုင်အဆိုင်ရေးရသည်။
ထိုအဆင့်အောင်မြင်မှ တကယ့်သင်တန်းများကို တက်ခွင့်ရသည်။
အဆို အတီး အက ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ဧည့်သည် (နိုင်ငံခြားသားများ) များကို ဧည့်ခံခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
အဖျော်ယမကာ တိုက်ကျွေးခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ထိုသင်တန်းများသင်ကြားလေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ ကျွမ်းကျင်သည့် အရည်အချင်းများကိုလိုက်၍ ထိုမိန်းမလှလေးများကို အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု ၃ ခုခွဲချလိုက်သည်။
1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေနပ်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ – Manjokjo (만족조)
2. မာဆတ်ခ်ျ အနှိပ်အဖွဲ့ -Haengbokjo (h행복조) –
3. သီချင်းဆို/ အကအဖွဲ့ (တခါတရံ တကိုယ်လုံးချွတ်၍ ကပြရသည်။) Gamujo (가무조)
သမ္မတက သဘောကျ၍ သူ့အတွက် လိင်မှုကိစ္စဖျော်ဖြေရန် အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများဆိုလျှင်တော့ ထိုမိန်းကလေးများသည် ထိုသမ္မတ၏ သီးသန့်အကြိုက်တို့ကို သိရှိရန် အထူးသင်တန်းတက်ကြရသည်။
သမ္မတကို ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးပေးရသည်မှ စ၍ အင်္ကျီဝတ်ပေးရသည်အထိ လိုလေသေးမရှိ အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်သင်ကြားရသည်။
တချို့ မိန်းမလှလေးများအား နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လွှတ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှသင်ယူလာသော နည်းလမ်းအသစ်များနှင့် သမ္မတကို စိတ်ပျော်အောင် ပြုစုတတ်စေရန်ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၇ နှစ်ရောက်လျှင် အသက်ကြီးသွား၍ သမ္မတက အလိုမရှိတော့…။ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် စစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့သည်။ထိုအခါမှ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။
ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှများအဖွဲ့မှကူးပြောင်းလာသော စစ်မှုထမ်းမိန်းမများသည် တခါတည်းနှင့် ရာထူးကောင်းကောင်း အမြှောက်စားခံရသည်။
အသက် ၂၇ နှစ် မပြည့်ခင် ( ဥပမာ-မှတ်ဉာဏ်မကောင်း၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာကြောင့် အမာရွတ်တခုရရှိ၊ စသည် ) အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ အပယ်ခံရသူများသည်လည်း မိဘဆွေမျိုးများထံ ပြန်ခွင့်မရှိပေ။
ထိုမိန်းကလေးများသည် အသက် ၂၇ ပြည့်သည်အထိ သတ်မှတ်ထားသောအဆောင်၌ သာ နေရသည်။
ထိုမိန်းကလေးများအား သမ္မတလက်အောက်ရှိ ပထမတန်းစား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ယောက်ျားသားများဓာတ်ပုံပြ၍ သူမကြိုက်သောယောက်ျားကိုရွေးချယ်စေသည်။ ထိုသူနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူမက သဘောကျလျှင် လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်။
ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုမိန်းကလေးများက ယောက်ျားများကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများက ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပေ။ထိုမိန်းကလေးများက သူမ လက်ထပ်ချင်သည့် ယောက်ျားမတွေ့လျှင် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့၏ အကူအလုပ်သမများအဖြစ် အသက်၂၇ ပြည့်သည်အထိ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂၇ နှစ်ပြည့်လျှင် အခြား မိန်းမလှလေးများ နည်းတူ စစ်တပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ထိုအခါမှ သူများနည်းတူ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။
သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ ထိုမိန်းမလှလေးများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသနည်း?
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မိန်ကလေးတယောက်သည် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့သို့ အရွေးချယ်ခံရလျှင် အလွန် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမသည် နိုင်ငံ၏ အလှဆုံးသော မင်းသမီးများဟုအသိအမှတ်ပြုခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်မှပေးသော လစာကောင်းကောင်း ( ၄,၇၀၀,၀၀၀ ဝမ် ) ရကြသည့်အပြင် သမ္မတတို့က သဘောကျလျှင် အပိုဆုငွေများလည်းရကြသည်။
ထို့အပြင် သမ္မတချစ်သော မိန်းကလေးများသည် နိုင်ငံခြားမှ မုန့်ပဲ သရေစာများ အဖိုးတန် အဝတ်အစားများ အဖိုးတန် လက်ဆွဲအိတ်များ လက်ခံရရှိတတ်သည်။
လက်ရှိ သမ္မတကင်ဂျောင်အွန်းဆိုလျှင် သူချစ်သောမိန်းကလေးတချို့အားအထူး နံပါတ်တပ်ထားသော မာစီးဒီးစ် ကား( Mercedes Benz ) များကိုပေးသည်ဟုဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ အပျော်ခရီးထွက်ခွင့်လည်းပေးသေးသည်။
အသက် ၂၇ နှစ်ကျော်သွားသဖြင့် စစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောမိန်းကလေးတို့သည် အတိတ်က သမ္မတသည် သူမအပေါ်ဘယ်အထိ အရေးပေးခဲ့သည် ဘယ်အဆင့်အထိချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့သည်ကို မူတည်၍ ရာထူးအနိမ့် အမြင့် ရကြသည်။
အထူးသဖြင့်သမ္မတနှင့်အတူ အိပ်စက်ဖူးပါက အထူးအခွင့်အရေးများ အများဆုံးရကြသည်။အသက် ၂၇ ကျော်သွားသော်လည်း သမ္မတက အနားမှာရှိစေချင်သော မိန်းမလှများကတော့ စစ်တပ်ထဲမဝင်ရပါ။သမ္မတအနီးနေရသော အချက် အပြုတ် အိမ်အလုပ် စသည့် အလုပ်တာဝန်တခုခုကို အပေးခံရတတ်သည်။
သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ မှ ထိုမိန်းမလှလေးများအား မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် မည်သူကမျှ အထင်သေး ရှုံ့ချခြင်းမပြုရဲကြပါ။
ထိုမိန်းမလှလေးများသည် တနည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်တွင် ဩဇာအာဏာရှိသူများလည်းဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက် ၂၇ ကျော်၍ သာမာန် လူတန်းစား အသိုင်းအဝိုင်းသို့ကျင်လည်သည့်အခါ လက်ထပ်ချင်သူများပြား၍ တလေးတစား အရေးပေးခြင်းခံရသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ နေမကောင်းဖြစ်လျှင် အုပ်ချုပ်ရေးလူတန်းစားများသာ တက်ရောက် ဆေးကုသခွင့်ရသော အထူးဆေးရုံတွင်အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့်ရကြသည်။
သမ္မတနှင့် အထက်လူကြီးများနှင့် ရင်းနှီးသော ထိုမိန်းမလှလေးတချို့သည်မာနကြီး၍ မောက်မာကြသည်ဟုလည်းဆို၏။
ပြည်သူတို့သည် ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက်ကြီး၍ အဖွားကြီးဖြစ်နေပါစေ မလေးမခန့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရဲကြပေ။
ဒုတိယတန်းစားမိန်းမလှများ ပျော်တော်ဆက် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။အသက် ၃၀ ကျော် မုဆိုးမ၊ တခုလပ် ၊ကလေးအမေတို့ အလွန် ချောမောလှပနေလျှင်လည်း ဒုတိယတန်းစား ပျော်တော်ဆက် အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရလေသည်။
ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အထက်အရာရှိများ မကျန်းမမာဖြစ်လျှင် အလုပ်အကျွေးပြုကြရသည်။ လိုအပ်လျှင် လိင်မှုကိစ္စပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုခြင်းများလည်းပြုလုပ်ပေးရသည်ဟုဆိုသည်။
ထိုမိန်းမချောများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသနည်း?
ထိုအမျိုးသမီးတို့၏ လစာကောင်းကောင်းရသည့်အပြင် သားသမီးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားရှိ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်သို့ စာမေးပွဲမဖြေပဲ အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် တက်ခွင့်ရလေသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့တွင် အလွန်လှပသော နိုင်ငံခြားသူများ ( များသောအားဖြင့် ရုရှားအမျိုးသမီးများ)လည်းပါဝင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး လောကနိယာမနှင့် မညီညွတ်မှုများကို များစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများသည် အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာပင် သူမတို့၏ဘဝရည်မှန်းချက်မှာ ပျော်တော်ဆက် အလှပြဖျော်ဖြေရေးမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ကြပေမည်။
ဖျော်ဖြေရေးမယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းသည်ပင် သူမတို့အတွက် အောင်မြင်မှုနှင့် ဂုဏ်တက်စရာဖြစ်နေသည်။
ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ထိုတိုင်းပြည်၏ အာဏာရှင်တို့ ဖန်တီးထားသောစနစ်ဆိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးတို့တွင် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။
ထိုမိန်းကလေးတို့၏စိတ်တွင် သူမတို့သည် သွေး၊ ချွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တဘဝလုံးကို ပေးဆပ်ထားသော…တာဝန်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေသော ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသောသူများဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိ ခံယူထားကြလေသည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မောက်မာကြသည်။ ဘဝင်မြင့်ကြလေသည်။
စစ်အာဏာရှင် အစိုးရသည် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး ကို ခြောက်လှန့်ခြင်းနှင့် အကြောက်တရားအောက်တွင် ဟန်ချက်ညီအောင် အစီအစဉ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့သည် အထင်ရှားဆုံး ဥပမာဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည်လောကနိယာမနှင့် မည်မျှပင် ကွာဟနေပါစေ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်မူအထွတ်အထိပ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှလေးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပြင်မှ တကယ့် လူ့အခွင့်အရေး တကယ့်အမှန်တရားကို သိချင်ကြမည်ထင်ပါသလား?
အကယ်၍ သူမတို့ အမှန်တရားကို သိလာခဲ့လျှင် သူတို့တဘဝလုံး ကြိုးစား ထူးချွန် ဂုဏ်တက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တော့မည် ဖြစ်သည်။
သူမတို့အတွက်တော့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမည်။သူမတို့ဘဝသည်သာ အကောင်းဆုံးဟု ထင်နေကြပေမည်။
ထိုမိန်းကလေးများနှင့်လက်ထပ်ကြသော ယောက်ျားများ၏ခံစားချက်သည် မည်သို့ရှိမည်နည်း?
အကြောက်တရား၏အောက်တွင်ရှိသော အဖြေသည် သံသယဝင်ဖွယ်ရာအတိပင်။
အာဏာရှင်သမ္မတတို့သည် သူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှကို ခြောက်လှန့်ခြင်းဖြင့် ရယူထားသည်။ ပြည်သူတို့ သွေးချွေးများနှင့်ရင်းထားသည့် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အခွန်အတုတ်တို့နှင့် စည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနေသည်။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူသည် တိုင်းပြည် ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများသည် သားသမီးများဖြစ်သည်။ ယခု ပြည်သူတွေမှာ ဆင်းရဲငတ်ပြတ်၊ အစာရေစာမရှိ၊ ရောဂါများထူပြောကာ လမ်းမများပေါ်၌ အေးခဲသေဆုံးနေကြသဖြင့် ပြည်သူကို လူလို့ပင် သတ်မှတ်ပုံမရတော့ပါ။
သူတို့သည် တိုင်းပြည်၏သမီးပျိုများကို လက်ပါးစေ ငွေဝယ်ကျွန်များလို…လိင်ကျွန် များလို.. ဆက်ဆံ၍ အသုံးတော်ခံနေသည့် အာဏာရ မုဒိမ်းကောင်ကြီးများသာဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အာဏာရှင်တို့၏ စနစ်ဆိုးကြီးများ ကျဆုံးမှသာလျှင် ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း အမှန်တကယ် ငြိမ်းအေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ တို့အား ပျော်တော်ဆက် ရသော မိန်းမလှများအဖွဲ့ အကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာ ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို အမျိုးသမီး လေးများ၏ ကံအကြောင်းတရားနှင့် တိုင်းပြည် အခြေအနေအရ ထိုကဲ့သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရခြင်းဖြစ်သဖြင့် နှိမ့်ချ ရိုင်းပြသော ကွန်မန့် (comments ) များဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းမပြုကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ သမ်မတတို့အား ပြျောတျောဆကျရသော မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့
ထိုအဖှဲ့အစညျးအကွောငျးကို ကမ်ဘာသို့ စတငျ အသိပေးပွောကွားသူမှာ ဂပြနျလူမြိုး Kenji Fujimoto( 藤本 健二 ) ဖွဈသညျ။
ထိုအဖှဲ့အစညျးအကွောငျးကို ဒုတိယပွောပွသူမှာ ၂၀၁၀ ခုနှဈတှငျ တောငျကိုရီးယားသို့ထှကျပွေးလှတျမွောကျခဲ့သော မွောကျကိုရီးယား အမြိုးသမီးတဦးဖွဈသညျ။ သူမသညျ သူမ၏ အတှအေ့ကွုံကို Marie Claire မဂ်ဂဇငျးတိုကျအား ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို၂၀၁၀ မှ ယနအေ့ထိ မွောကျကိုရီးယားမှ ထှကျပွေးလှတျမွောကျခဲ့သူမြားက ဖွညျ့စှကျ၍ “ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့” အကွောငျးကို တောငျကိုရီးယား TV interview တို့တှငျ အသေးစိတျပွောကွားခဲ့ပါသညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့တှငျမိနျးမလှပေါငျး ၂၀၀၀ ကြျောပါဝငျသညျ။ ထိုမိနျးမလှတို့သညျ အဓိကအားဖွငျ့ သမ်မတကိုဖြျောဖွရေနျဖွဈသညျ။ထို့အပွငျ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ၏ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့အစညျး (Worker’s Party of Korea)ရှိ ရာထူးကွီးသူမြားကိုလညျး ဖြျောဖွရေသညျ။
ကငျမျဂြောငျအီးလျ ( Kim Jong-il l) က ဖခငျ ကငျမျအီးလျဆောငျး ( Kim il Song )အား စိတျပြျောရှငျစရေနျ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့ စတငျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။ထိုမိနျးကလေးမြားသညျ မွောကျကိုရီးယား၏ အလှဆုံးမိနျးကလေးမြား ဖွဈကွသညျ။သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအီးလျသညျ သူ့အဖအေကွိုကျ မိနျးမလှလေးမြားကိုရှေးခယျြပေးခဲ့သညျ။
မကျြနှာဖောငျးဖောငျးနှငျ့ ခဈြစရာကောငျးသော မိနျးကလေးမြားကိုရှေးခယျြသညျ။
အရပျ ၁၆၀ စငျတီမီတာ ကြျောကြျောဖွဈနရေမညျ။ (၁၇၀ စငျတီမီတာအောကျ)
အသကျ ၁၆ နှဈမှ ၁၇နှဈကွားဖွဈရမညျ။
ထိုသူတို့သညျ မိနျးမလှလေးမြား လှတျသှားမညျစိုး၍ တယောကျခငျြး သသေခြောခြာ စီစဈသညျ။ အရှေးခယျြခံရသော မိနျးကလေးမြားသညျ ငွငျးဆနျပိုငျခှငျ့မရှိပါ။တခါတရံ သမ်မတကိုယျတိုငျလာ၍ စငျတျောကောကျသညျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈ ဧပွီလတှငျ သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအှနျး အတှကျ” ပြျောတျောဆကျမိနျးမလှမြား အဖှဲ့အသဈ” ကိုထပျမံဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။
မကျြနှာသှယျသှယျ နှငျ့ ခဈြစရာကောငျးသော မိနျးကလေးမြားဖွဈရမညျ။
အရပျ ၁၇၀ စငျတီမီတာ ကြျောရမညျ။
မိနျးကလေးတို့သညျ သူမကိုယျသူမ အလှဆုံးဟုထငျသော အမူအရာကို လုပျပွရသညျ။သူမ၏ အတျောဆုံး ဖြျောဖွရေေးတခုကို သရုပျဆောငျပွရသညျ။ သီခငျြး၊အက၊အတီးအမှုတျ စသညျ။မြိုးရိုးကောငျးရမညျ။မြိုးရိုးထဲတှငျ ထောငျကသြူမရှိစရေ။
ပထမအဆငျ့ အောငျမွငျသောမိနျးကလေးမြား သညျ တဈလအကွာတှငျ ဆေးစဈရသညျ။အဓိက အပြိုစဈ မစဈ ဆေးစဈခွငျးဖွဈသညျ။
ခွဆေုံး ခေါငျးဆုံး အမာရှတျတခုရှိလြှငျ အပယျခံရသညျ။ကူးစကျရောဂါရှိ မရှိ ၊ ကနျြးမာရေးကောငျးမကောငျး အကုနျစဈခံရမညျဖွဈသညျ။
တတိယအဆငျ့ အောငျမွငျသှားသောမိနျးကလေးသညျ ဘာဆကျလုပျရမညျနညျး?
အလယျတနျးကြောငျးပွီးဆုံးပါက မွောကျကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ မွို့တျော ပွုံယမျးသို့ အပို့ခံရသညျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ အသကျ ၂၇ နှဈပွညျ့သညျအထိမိဘ ဆှမြေိုးမြားနှငျ့ ဆကျသှယျခှငျ့မရတော့ပေ။ပထမဦးစှာ ထိုမိနျးကလေးတို့သညျ သမ်မတ ၃ ဦး သမိုငျးကို အသေးစိတျ မှတျသား ကကျြမှတျရလသေညျ။
သူတို့နှငျ့ပတျသကျသော စာအုပျမြား ဖတျနိုငျသလောကျမြားမြား ဖတျရသညျ။စာစီစာကုံးမြားရေးရသညျ။ ကြေးဇူးတငျကွောငျးစာလှာမြားစှာကိုလဲ အပွိုငျအဆိုငျရေးရသညျ။
အဆို အတီး အက ကြှမျးကငျြမှုသငျတနျး
ဧညျ့သညျ (နိုငျငံခွားသားမြား) မြားကို ဧညျ့ခံခွငျး ကြှမျးကငျြမှုသငျတနျး
အဖြျောယမကာ တိုကျကြှေးခွငျး ကြှမျးကငျြမှုသငျတနျး
သမ်မတကို ရနှေေးဖွငျ့ ရခြေိုးပေးရသညျမှ စ၍ အကငြ်္ီဝတျပေးရသညျအထိ လိုလသေေးမရှိ အကွောငျးအရာမြားကို အသေးစိတျသငျကွားရသညျ။
အသကျ ၂၇ နှဈရောကျလြှငျ အသကျကွီးသှား၍ သမ်မတက အလိုမရှိတော့…။ ထိုမိနျးကလေးတို့သညျ စဈတပျတာဝနျထမျးဆောငျရတော့သညျ။ထိုအခါမှ မိဘဆှမြေိုးတို့ဖွငျ့ ဆကျသှယျခှငျ့ရသညျ။
အသကျ ၂၇ နှဈ မပွညျ့ခငျ ( ဥပမာ-မှတျဉာဏျမကောငျး၊ ထိခိုကျဒါဏျရာကွောငျ့ အမာရှတျတခုရရှိ၊ စသညျ ) အကွောငျးတခုခုကွောငျ့ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့မှ အပယျခံရသူမြားသညျလညျး မိဘဆှမြေိုးမြားထံ ပွနျခှငျ့မရှိပေ။
ထိုမိနျးကလေးမြားအား သမ်မတလကျအောကျရှိ ပထမတနျးစား အုပျခြုပျရေးပိုငျး ယောကျြားသားမြားဓာတျပုံပွ၍ သူမကွိုကျသောယောကျြားကိုရှေးခယျြစသေညျ။ ထိုသူနှငျ့ တှဆေုံ့ပွီး သူမက သဘောကလြှငျ လကျထပျခှငျ့ရှိသညျ။
ထူးဆနျးသညျမှာ ထိုမိနျးကလေးမြားက ယောကျြားမြားကိုရှေးခယျြရခွငျးဖွဈသညျ။ ယောကျြားမြားက ရှေးခယျြခှငျ့မရှိပေ။ထိုမိနျးကလေးမြားက သူမ လကျထပျခငျြသညျ့ ယောကျြားမတှလြေှ့ငျ သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့၏ အကူအလုပျသမမြားအဖွဈ အသကျ၂၇ ပွညျ့သညျအထိ နထေိုငျရမညျဖွဈသညျ။
သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့မှ ထိုမိနျးမလှလေးမြားသညျ မညျသို့သော အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုခံစားရသနညျး?
အထူးသဖွငျ့သမ်မတနှငျ့အတူ အိပျစကျဖူးပါက အထူးအခှငျ့အရေးမြား အမြားဆုံးရကွသညျ။အသကျ ၂၇ ကြျောသှားသျောလညျး သမ်မတက အနားမှာရှိစခေငျြသော မိနျးမလှမြားကတော့ စဈတပျထဲမဝငျရပါ။သမ်မတအနီးနရေသော အခကျြ အပွုတျ အိမျအလုပျ စသညျ့ အလုပျတာဝနျတခုခုကို အပေးခံရတတျသညျ။
သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့ မှ ထိုမိနျးမလှလေးမြားအား မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံတှငျ မညျသူကမြှ အထငျသေး ရှုံ့ခခြွငျးမပွုရဲကွပါ။
ပွညျသူတို့သညျ ထိုမိနျးမလှလေးမြား အသကျကွီး၍ အဖှားကွီးဖွဈနပေါစေ မလေးမခနျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈအောငျမလုပျရဲကွပေ။
ဒုတိယတနျးစားမိနျးမလှမြား ပြျောတျောဆကျ အဖှဲ့ဖွဈသညျ။အသကျ ၃၀ ကြျော မုဆိုးမ၊ တခုလပျ ၊ကလေးအမတေို့ အလှနျ ခြောမောလှပနလြှေငျလညျး ဒုတိယတနျးစား ပြျောတျောဆကျ အဖှဲ့မှ ရှေးခယျြခွငျးကို ခံရလသေညျ။
ထိုမိနျးမခြောမြားသညျ မညျသို့သော အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုခံစားရသနညျး?
ထိုမိနျးကလေးတို့၏စိတျတှငျ သူမတို့သညျ သှေး၊ ခြှေး၊ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ တဘဝလုံးကို ပေးဆပျထားသော…တာဝနျကပြှေနျအောငျထမျးဆောငျနသေော ထူးခြှနျပွောငျမွောကျကွသောသူမြားဟု မိမိကိုယျကို မိမိ ခံယူထားကွလသေညျ။
အကယျ၍ သူမတို့ အမှနျတရားကို သိလာခဲ့လြှငျ သူတို့တဘဝလုံး ကွိုးစား ထူးခြှနျ ဂုဏျတကျခဲ့သမြှအရာအားလုံး သဲထဲရသှေနျ ဖွဈကုနျတော့မညျ ဖွဈသညျ။
အကွောကျတရား၏အောကျတှငျရှိသော အဖွသေညျ သံသယဝငျဖှယျရာအတိပငျ။
အာဏာရှငျသမ်မတတို့သညျ သူတို့လိုခငျြတာမှနျသမြှကို ခွောကျလှနျ့ခွငျးဖွငျ့ ရယူထားသညျ။ ပွညျသူတို့ သှေးခြှေးမြားနှငျ့ရငျးထားသညျ့ ပွညျသူ့ ဘဏ်ဍာ အခှနျအတုတျတို့နှငျ့ စညျးစိမျကို အပွညျ့အဝ ခံစားနသေညျ။
တိုငျးပွညျအုပျခြုပျမငျးလုပျသူသညျ တိုငျးပွညျ၏ ဖခငျဖွဈသညျ။ ပွညျသူမြားသညျ သားသမီးမြားဖွဈသညျ။ ယခု ပွညျသူတှမှော ဆငျးရဲငတျပွတျ၊ အစာရစောမရှိ၊ ရောဂါမြားထူပွောကာ လမျးမမြားပျေါ၌ အေးခဲသဆေုံးနကွေသဖွငျ့ ပွညျသူကို လူလို့ပငျ သတျမှတျပုံမရတော့ပါ။
သူတို့သညျ တိုငျးပွညျ၏သမီးပြိုမြားကို လကျပါးစေ ငှဝေယျကြှနျမြားလို…လိငျကြှနျမြားလို.. ဆကျဆံ၍ အသုံးတျောခံနသေညျ့ အာဏာရ မုဒိမျးကောငျကွီးမြားသာဖွဈပါသညျ။